» “प्रधानमन्त्री देउवाको, घरमा चोरी, अहिले सम्मको, सबै सम्पत्ति स्वहा” “प्रधानमन्त्री देउवाको, घरमा चोरी, अहिले सम्मको, सबै सम्पत्ति स्वहा” – हाम्रो खबर
हाम्रो खबर संबाद दाता 53 Views
“काठमाडौ। प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवाको घरमा चोरीको भएको छ। दशैँको टीका लगाउन आफन्तकोमा गएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाका भाइ बस्दै आएको धनगढीस्थित घरमा चोरी भएको हो।”
“धनगढी उपमहानगरपालिका, २ सन्तोशी टोलमा देउवाका भाई भरतबहादुर देउवा बस्दै आएका थिए। सोही घरमा शुक्रबार दिउँसो दशैँको टीका लगाउन आफन्तकोमा गएका बेला सुनका गरगहना र नगद चोरी भएको हो।”
भरतबहादुरले सन्तोशी,टोलमै रहेको आफन्तको घरमा टीका लगाउन गएको समयमा चोरी भएको बताए। उनले चार हजार नगदसहित करीब तीन तोला सुन र तीन तोला चाँदी चोरी भएको बताउँदै घरमा रहेको अन्य सामान भने सुरक्षित रहेको बताए।
हामी ढोकामा ताल्चा! लगाएर नजिकै रहेको आफन्तकोमा टीका लगाउन गएका थियौँ,’ देउवाले भने, ‘ताल्चा रडले खोलिएको छ । सबै दराज खोलेर नगदसहित तीन तोला सुन र तीन तोला चाँदी लगिएको छ।
घरमा चोरी भएको, खबर पाउने बित्तिकै प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) विश्व अधिकारीले बताए ।घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै चोरी भएको नगद र गरगहनाबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भइनसकेको प्रहरीले जानाएको छ।
चाडबाडको बेला,मा गरगहना, धनसम्पति बढि नै चोरी हुने गर्दछ। प्रहरीले यसका लागि जनचेतना अभियान संचालन गरेको भएपनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन्। अझ भिआईपीको घरमा चोरी भएको विषय निकै रहस्यमय छ। यस्तो निकै खतरनाक चोर भएको चर्चा चलेको छ।
दशैंमा चोरी र ,दुर्घटना, कसरी सतर्क हुने : हामी नेपालीहरुको महान् चाड दशैं सुरु भइसकेको छ। दशैं संगसंगै सबैतिर उत्साह उमंग छाएको छ । उपत्यका पनि अरु बेला भन्दा केही सुनसान भइसकेको छ। दशैं मान्नको लागि उपत्यका छाड्नेहरुको क्रम बढ्दो छ । दैनिक हजारौंको संख्याले उपत्यका छोडर गइरहेको छन् । दशै संगसंगै विभिन्न बेतिथिहरु पनि निम्तिएका छन् ।
आफ्नो विभिन्न ,आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न बाहिरी जिल्लाका लाखाैँ मानिसहरु उपत्यका बस्छन् । कोही रोजगारीको लागि उपत्यका भित्रिएका हुन्छन् त कोही आफ्नो पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आएका हुन्छन् । व्यापार व्यवसाय गर्न आफ्नो घर छोडेर उपत्यका आउने पनि त्यत्तिकै छन् ।
दशैं लागेसंगै सबै, आफ्नो डेरा, सटर, अफिस बन्द गरेर आफ्नो जन्मथलो तिर लाग्छन् । घरजाने उमंग संगसंगै उनीहरुले आफ्नो घरको सुरक्षा विर्सन्छन् । चाडबाड ओइरिएसंगै लुटेरा, पाकेटमार र चोरहरुको पनि ओइरो लाग्छ । घरघरमा चोरीको घटनाहरु घट्छ्, बजारमा पाकेटमारको प्रकोप पनि त्यत्तिकै बढ्छ ।
हामी घर जान्छौँ तर, आफ्नो डेराको सुरक्षामा ध्यान दिँदैनाैँ। झन् चाडबाडको बेलामा दिउँसै चोर पसेको पनि थाहा हुँदैन। सबै आ आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन्। कतिले कोठामा ताला ठोकेर जान्छन् तर घरधनीलाई समेत जानकारी गराएका हुँदैनन् । यस्तोमा चोरहरु सजिलै घरभित्र पस्न सक्छन् ।
थोरै हतारले गर्दाखेरी, कसैले कोठामा तालासमेत लगाउन बिर्सिन्छन् । जसको कारण चोरी हुन सक्छ र दशैं मान्न गएकाहरुको चाडबाडको अनुभव नै खल्लो हुने गर्दछ । यसमा महानगरपालिकाले पनि ध्यान पुर्याउनुपर्दछ । महानगरपालिकाले जनताहरुको सुरक्षाको लागि सक्दो प्रहरी खटाउनुपर्दछ ।
घरधनीले पनि कोठा, बस्नेहरुको सामानको सुरक्षा गर्नुपर्छ । घरधनीले आफ्नो घर भाडामा लाइसकेपछि कोठा बस्ने कहाँ गए । कहिलेसम्म फर्किन्छन् भनेर सम्पूर्ण कुराहरु सोधपर्छ गर्नुपर्छ । अझ चाडबाडको बेलामा त घरधनीहरु आफ्नो सँगै कोठा बस्नेहरुको समेत सुरक्षाको ख्याल गर्नुपर्दछ ।
कोठाबहालमा लगाउने, र जिम्मेवारी वहन नगर्ने घरधनीहरु यत्तिकै छन्। आफ्नो घर भाडामा लगाउने अनि त्यहाँ नबसेर अन्त्यै गएर बस्ने घरधनीहरु पनि छन् । यस्तो अवस्थामा चोरहरु दिउँसै पस्न सक्छन्। दशैंको बेला अधिकांशलाई दशा लाग्ने गर्छ ।
सार्वजनिक यातायातमा पनि, पाकेटमारको प्रकोप बढ्दो छ । कसैलाई सुइको नदिईकन पाकेटमारहरुले कसैको मोबाइल, पर्स चोरी रहेको छन् । अझ निजी सवारी रोकेर समेत पाकेट मारेको घटनाहरु पनि हाम्रो सामु नभएको भने होइन्। यस्तोमा आफूपनि सतर्क हुन निकै आवश्यक देखिन्छ ।
यता, सार्वजनिक यातायात,को आफूखुसी बढाइएको भाडालाई पनि बेतिथिको रुपमा हेर्न सकिन्छ। सार्वजनिक यातायातले आफूखुसी भाडादर कायम गर्नु कानुन विपरीत हो । संविधानलाई आफ्नो पैतालामुनि राखेर हिँडेका यातायात व्यवसायीलाई भने कसैले नियन्त्रणमा ल्याउन सकिरहेको छैन् ।
चाडबाडको मुखमा आएर, यसरी आफूखुसी भाडा बढाउनु उचित नभएको सर्वसाधारणहरुको ठम्याइ छ। तै माथि पनि कानृनलाई आफ्नो हातमा लिएर जनता ठग्नु लाजको पसारो भएको सर्वसाधारण बताउँछन्।
यसरी आफूखुसी भाडा, बढाउने यातायात व्यवसायीलाई देउवाको सरकारले कारबाही नगरेको भन्दै सर्वसाधारणहरु निकै आक्रोशित छन् । यातायात व्यवसायीहरु खुलमखुल्ला हामीले सरकारलाई व्यक्तिगत सहयोग गरेको छौँ। नभए कारबाही गर्न सडकमा आउँदैनथे
कोरोना म,हा,मा,रीले,अधिकांशलाई बेरोजगार बनाइदिएको छ । बेरोजगारी बढेसंगै महँगी पनि बढेको छ । जसरी पनि खानैपरेको छ । जसको कारण पनि चोरीको घटनाहरु यो वर्ष अझै बढ्न सक्छ । महँगीले आकाश छोइसकेको छ। हरेक साता सामानको भाउ उथलपुथल हुन्छ ।
यो हप्ता एक सय, पचास परेको सामान अर्को हप्ता दुईसय पर्छ। हप्तामै पचास रुपियाँ पर्छ। ज्यालादारी गर्ने र निजी अफिसमा काम गर्नेहरुको तलब भने बढ्दैन्। अनि यस्तोमा कसरी खाने ? यसको जवाफ त सरकारले दिनुपर्ने हो। गरिब जनतालाई एक छाक पेट भर्न पनि धौ धौ परिसकेको छ।,
बजार अनुगमन, भने एक प्रतिशत पनि छैन् । व्यापारीहरुले कालोबजारी समेत गरेको छन्। तर पनि सरकार किन मौन छ । गरिब जनता भोकले मर्न लागेको सरकारले किन देख्दैन् । झन चाडबाडको बेलामा महँगी यत्रो बढेको छ कि न्यून आयस्तर हुनेलाई त कसरी चुलो बाल्ने भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ।
वर्षाैँदेखि कालोबजारी, यथावत् नै छ। म्याद सकिएको सामानहरु पनि बजारमा छ्याप्छयाप्ती बढेको छन् । तापनि अनुगमन हुन नसक्नु कति सर्मनाक कुरा हो । सरकारले नै जनता ठग्न व्यापारीहरुलाई छुट दिएको हो।
दशैको लागि भनेर,विभिन्न ठाउँमा दशैंलक्षित बजार खुलेको छन् । जहाँ अत्यास लाग्दो भीड देख्न सकिन्छ । यस्तो भीडमा सतर्क हुन निकै आवश्यक छ । सामान किन्दा कतिले हतारमा आफ्नो पर्स, झोला बिर्सिने गर्दछन् । त्यस्तै भीडभाडमा आफै सजकता अप्नाउन निकै जरुरी छ ।
भीडभाडमा हिँड्दा,आफ्नो सामानको ख्याल राख्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो। अझ व्यागमा पैसा, कुनै महँगो सामान छ भने त्यस्तो बेलामा निकै सतर्क हुनृपर्छ । यदि सतर्क हुन सकिएन बेला दशैं मान्न खरिददारीमा हिँडेकाहरुलाई दशा निम्तिन्छ। अलि धेरै पैसा बोकेर हिँड्नेहरुले कसरी हुन्छ पाकेटमाराले नभेट्नेगरी पैसा बोकेर हिँड्नुपर्छ।
अझै सार्वजनिक यातायात ,चढ्दा आफ्नो पैसा भएको व्याग कसैलाई पनि समात्न दिनुहुँदैन। कोरोनाको जोखिम कायम नै रहँदा पनि सार्वजनिक यातायातमा निकै भीड छ । यस्तो भीडमा यात्रा गर्नु भनेको डरमर्दो भएको छ। मुख हेरेर को चोर हो भनेर चिन्न सकिँदैन्।
पाकेटमारलाई सबैभन्दा ,सजिलो भीडभाडमा चोरी गर्न हुन्छ। त्यसैले भीडभाडमा जानुभन्दा अगाडि पूर्ण तयारी गर्नुपर्दछ । पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने, आफ्नो सामानको ख्याल कसरी, गर्ने यसमा सर्वसाधारण पनि आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । एकचोटि चारी भइसकेपछि जति रोइकराई गरे पनि त्यो फर्केर आउने छैन्।
सिट संख्याभन्दा, बढी यात्रु नहाल्न भनेतापनि कोचाकोच यात्रु हालेको छन्। कोरोनाको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखिएको छैन्। झुन्डाएर हुन्छ कि कोचाएर यात्रु बोकेर हिँडेको छन्। यस्तोमा पाकेटमारा छैनन् भनेर भन्न सकिन्न । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्दा सवारी दुर्घटना हुन सक्छ।
अझ नेपालको ०सडकको, हेर्नलायकको छ । जताततै खाल्डाखाल्डै मात्र देख्न सकिन्छ। वर्षेनि करोडौं बजेट त्यही खाल्डा पुर्दै ठिक हुन्छ । यस्तोमा सवारी दुर्घटना हुन सक्दैनन् भन्न सकिन्न । यात्रु संगसंगै सामानको चाप पनि उत्तिकै छ। सवारीले थेग्न नसक्ने गरि सामान हालेको छन्।
बैंक फाइनान्सबाट, पैसा निकाल्न जाँदा पनि धेरै सजक हुनुपर्छ । चोरहरु बैंक फाइनान्सको गेटबाहिर कुरेर बसेको हुन्छन् । को कहाँ जान्छ भनेर उनीहरुले नजर राखेको हुन्छन् । बैंकबाट पैसा लिएर गेटबाहिर निस्किन नपाउँदै हाम्रो खल्ती रित्तो भइसकेको हुन्छ।
त्यसैले पनि पैसा, निकाल्न र राख्न जाँदा धेरै होसियार हुनृपर्छ । चाडबाड सबैको लागि हो । देशको कानुन र राजनीतिक स्थिति नै यस्तो छ । म मिहिनेत गरेर कमाएर खान्छु भन्नेले पनि खान पाएको छैन्। बेरोजगारी दिनहुँ बढिरहेको छ। त्यसैले चोरीको घटनाहरु बढेको हो।
महँगी र ,कालोबजारीबाट नेपालीहरुले कहिलेपनि छुट्कारा नपाउने भए । ठगहरुको नेपालमा बिगबिगी छ। सरकार केही गर्न सक्दैन् लाचार भएको प्रमाण देखाएर बसेको छ। यस्तोमा देशका सम्पूर्ण नागरिकले रोजगारी पाउलान् । आफ्नो बलबुतोमा केही गएर खान सक्लान् भन्न सकिन्न्। तर दशैंको मुखमा आएर कोही पनि यस्ता घटनाको उदाहरण बन्न नपरोस्। साथै कसैले सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनु नपरोस्।